Mens Cowsuede Moccasin Slipper Mens Akanzwa Venetian Drive shangu Shangu Shangu - Goodao Technology Co, Ltd.
Mens Cowsuede Moccasin Slipper Mens Akanzwa Venetian Drive shangu Shangu Shangu
Muenzaniso NO.: BLM16003
Shangu-Mens Cowsuede Venetian-Blm16003
Simudza shangu yako yekuunganidza neaya akanaka Artificial Leather kumusoro. Yemazuva ano inochinja-chinja kupfeka shangu dzevanhurume dzinotaridzika. Saizi yeshangu inokwana pakati nepakati hupamhi. Kugutsikana kweVatengi ndiko Kukosha Kwedu Kwekutanga saka TINODA kukunzwa iwe kana tichigona kuendesa irinani yekutenga ruzivo Kana iwe usingaoni saizi yaunoda, ndapota email kwatiri saizi kana ruvara iwe rwaunoda uye isu tinokuzivisa iwe kana tichigona kukutorera iwe.
Kubva kungwara kwekunyepedzera (AI) kuenda kumberi kwekugadzira Leather (AL) vanokwira vanotarisa uye vanonzwa kunge anodhura suede matehwe asi aine zvimwe zvakanaka.
Aya ma AL epamusoro epamusoro akareruka patsoka dzako kupfuura mamwe shangu dzematehwe, ari nyore kuchenesa, anogadzirwa nekusvibisa kushoma kune nharaunda yedu - Eco-Inoshamwaridzika, uye haina chero zvigadzirwa zvemhuka.
Nei uchifanira kushandisa yakawanda kune mamwe masitaera? Mapfekero ekubudirira neaya anoyevedza mens akajairika kutyaira slip pane loafers.
Anopfeka akasiyana-siyana akagadzirwa senge isina chimiro chimiro chebasa kusvika pakupera kwevhiki. Vanotaridzika vakakura nesutu, asi vanogona kupfeka seyakareruka nejeans kune yakasarudzika mararamiro.
Superb inoshanduka inogara yakasimba inounza nyaradzo nhanho dzese.
● Kana Kunzwa kumusoro kunowanikwa!
● Isu takagadzira akasiyana lining zvinhu eiyi dhizaini. Outsole inopesana nekutsvedza TPR DOT outsole
● Shinda yakakomberedza vamp yakagadzirwa nemaoko.
● Yakanaka TPR DOT ANTI-SLIPPING OUTSOLE
Chiteshi SHANGHAI / NINGBO
Zvadaro: Mens Cowsuede Moccasin Slipper Mens Akanzwa Venetian Drive shangu Shangu Shangu